နယူးဇီလန်ဗဟိုဘဏ်၏ သြဂုတ်လဆွေးနွေးပွဲတွင် အတိုးနှုန်းကို ယခင်နှုန်းထားအတိုင်းသာ မပြောင်းမလဲထားရှိခဲ့ပါသည်. RBNZ အကြီးအကဲ Graeme Wheelerအဆိုအရ မသေချာမရေရာမှုများစွာ ရှိနေသေးသည့်အတွက် ယခုနှုန်းထားအတိုင်းသာ ဆက်ထားပြီး စဉ်းစားအချိန်ယူမည့်ပုံပေါ်နေပါသည်. Wheelerသဘောထားသာ အလေးသာသွားပါက ဈေးကွက်တွင် NZDတန်ဖိုးကျဆင်းနိုင်ပါသည်. ထို့အပြင် နယူးဇီလန်အစိုးရသည် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ခန့်မှန်းချက်ကို မကြာသေးမီကပင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်.
နယူးဇီလန်ဗဟိုဘဏ် အနေနှင့် အတိုးနှုန်းတင်မည့်ကိစ္စအား dovish လေသံပျော့ခဲ့ပါက NZDတန်ဖိုး ကျဆင်းနိုင်ပါသည်. ဗဟိူဘဏ်တာဝန်ရှိသူများ၏ မှတ်ချက်ပြောဆိုချက်များထဲတွင် အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ကိစ္စနှင့် ပက်သက်ပြီး ပြောသံဆိုသံပိုကြားရပါက နယူးဇီလန်ငွေကြေး တန်ဖိုးမြင့်တက်နိုင်ပါသည်.
နယူးဇီလန်ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲကို စက်တင်ဘာ ၂၆ရက် ၂၃:၀၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး NZDကို ရောင်းဝယ်ရန် အချိန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.